Buuxinta qorshahayga Baltimore - Geofumadas
Abriil, 2008 Cartografia, Microstation-Bentley
Raadinta, raadinta inaad ku sameyso Baltimore si aad u aragto inaan ka qayb gali doono shirka Nidaamka Bentley, Waxaan ka helay bandhig muujinaya khariidado duug ah oo Navteq uu kafaala qaadanayo oo magaciisu xiiso leeyahay: «Raadinta booskeena adduunka«. Bandhiggan ayaa lagu qabtaa Baltimore laga bilaabo Maarso illaa Juun ee sannadkan iyo hal mayl laga bilaabo Inner Harbor.
Tani waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah bandhigyada ugu caansan Waqooyiga Ameerika. Waxay hubinayaan in martida ay awood u yeelan doonaan inay wajahaan waji ay wajahayaan qaar ka mida kharashaadka ugu weyn adduunka, iyo ma aha oo kaliya khariidooyinka laga sameeyay kartoomayaasha laakiin khariidado karti leh meelo kala duwan oo adduunka ah. Bandhigga waxaa ku jira khariidado qariib ah, faahfaahsan oo faahfaahsan, qoraallo ay sameeyeen sahamiyaal, xawaalado, khariidado meelo kala duwan oo adduunka ah oo ay ka mid yihiin kiniiniyada cunnida ee Mesopotamia. Sidaa daraadeed waxaan heli doonaa $ 12 dollars oo ah kharashka oo waxaan isku dayi doonaa inaan arko sida safarka telefoonka gacanta ee tikidhada gacanta.
Halkan waxaan ku tusayaa khariidada Aztec Capital, Tenochtitlán. Wax aan ka ahayn mid aan ka ahayn Hernán Cortés at 1524 ... si fiican, waxaan u maleynayaa inaan ku raaxeysan doono.
Waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa xiriirka qolka Map
Post Previous«Previous Dhiirigelinta toosan oo leh rabitaan wanaagsan si aad u gaarto Hispanics
Post Next UTM ayaa isku duweysa qaybta koonfurtaNext »
2 Jawaab ayaa ah "Qoritaanka qorshahayga Baltimore"
Alberto waan ku mahadsanahay, waan xasuustaa.
Haddaad xiiseyneyso tareennada tareenka, booqo madxafka tareenka ee Baltimore oo ay kujiraan guri wareegsan oo cajiib ah oo ay ku jiraan duullimaadyo duullimaadyo badan leh iyo isku socodkii tobannaankii sano ee ugu horreeyay qarnigii 19-aad. Iyo hadaad heli karto inaad maydho. DC, (Daqiiqadaha 40 baabuur iyo adeegga tareenka aad ufiican), ha ilaawin inaad booqato "Khariidadda Qaybta" ee maktabadda Golaha, halkaas oo aad naftaada ugu madadaalin karto ururinta qaab dhismeedka khariidadaha Isbaanishka ee Koonfurta Ameerika.